Indlu yonke kunye ne-tub eshushu ngasekunene eLac St Jean
Ngokuthe ngqo kumda okanye echibini elimangalisayo iSt-Jean, indlu esanda kufakwa ngebhafu eshushu, kunye nolwandle lwakho olukhulu! Ngaphezulu kwe-7500 yeenyawo zesikwere sesanti, ukwenzela wena nje! Sibandakanya zonke izibonelelo zeholide yephupha kunye nosapho.
Wifi yonke indawo endlwini.
Zonke iidrapery kunye neetawuli zibandakanyiwe.
Inqaku elibalulekileyo malunga neerhafu. Sihlawula i-GST/PST kuzo zonke iirenti. Iirhafu sele zibandakanyiwe kumaxabiso ethu.
Indlu yonke yeyakho!
Sikunika yonke into oyifunayo ukwenza ukuhlala kwakho kube lula njengoko kunokwenzeka, njengokutya okusisiseko (ibhotela, i-condiments, iziqholo ze-steak, ioli yeoli, njl.), ipropane, iinkuni zomlilo elunxwemeni, iitawuli zaselwandle kunye neetawuli zokuhlambela, zonke iilinen, iisepha, iisepha, izixhobo zomntwana (isitulo esiphakamileyo, ipaki, ucingo phezulu kwizinyuko, iimonitha), kunye neekofu zakho zokuqala!
- Ikhitshi epheleleyo
-Indawo yokuphumla enomabonakude
- Igumbi lokulala elivaliweyo kunye nebhedi yenkosi
- Igumbi lokuhlambela elinebhafu kunye neshawari
- Phuma ngqo elunxwemeni
-Igumbi lokulala elivaliweyo elinebhedi enkulu kunye nebhedi enye
-Igumbi lokulala eli-2 elivaliweyo elinebhedi enkulu yokumkanikazi kunye nebhedi enye
- Indawo yokuhlala enebhedi yesofa
- Igumbi lokuhlambela elineshawa kunye nebhafu
- Ithabhu eshushu
- Indawo yokwenza umlilo ngqo elunxwemeni (iinkuni zibandakanyiwe!)
- Isethi yezitulo zaselwandle elunxwemeni
- Itafile yokutyela elunxwemeni
- Amathoyizi olwandle aBantwana
- BBQ iseti
-Izixhobo zeNautical (i-kayak, ibhodi yokubhexa)
-Iivesti zobomi zabantwana, abafikisayo kunye nabantu abadala
- Kunye nokuninzi!
4.96 · Izimvo eziyi-155
- "Véloroute des Bleuets" indlela yebhayisekile (400m)
- Zoo yaseSaint-Félicien
"Traversée International du Lac St-Jean"
- Izifundo zegalufa ezi-2
-Ekunene echibini, ukufikelela ngokulula kwi-ski-doos (ebusika)
Silawula indlu kwindawo engaphandle kwesiza. Siza kufumaneka kuphela nge-imeyile okanye ngefowuni. Nangona kunjalo sinabo abantu abakwisiza abasicocayo kunye nokubalungisa. Ukuba kukho nantoni na efunekayo, unokuthembela kwinkxaso yethu epheleleyo.
Silawula indlu kwindawo engaphandle kwesiza. Siza kufumaneka kuphela nge-imeyile okanye ngefowuni. Nangona kunjalo sinabo abantu abakwisiza abasicocayo kunye nokubalungisa. Ukuba k…
Inombolo yomthetho: 295363
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Chambord